Gịnị bụ positivism mmekọahụ | Bezzia
Maria Jose Roldan | 14/09/2021 23:03 | Mmekọahụ
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ụgha, Taa, a ka nwere ụzọ dị ogologo iji gaa na mpaghara esemokwu dị ka mmekọahụ. Ruo afọ ole na ole gara aga, mmekọrịta nwoke na nwoke na nwanyị na -alụbeghị di ma ọ bụ nwunye na -enwekarị mmekọrịta maka ụfọdụ ndị nwere naanị otu njedebe ma ọ bụ ebumnuche, nke na -abụghị ihe ọzọ karịa ịmụpụta mmadụ. Ọ dabara na ihe na -aga n'ihu ntakịrị, ọ na -adịkarịkarị ịhụ di na nwunye idina ụdị onwe ma ọ bụ di na nwunye na -enwe mmekọahụ.
Positivism mmekọahụ na -esiwanye ike na ọha mmadụ na ọ dị mma inwe uche ghe oghe n'ihe gbasara mmekọ nwoke na nwanyị. N'edemede na -eso, anyị ga -agwa gị okwu n'ụzọ zuru ezu gbasara ihe gbasara mmekọ nwoke na nwanyị a kpọtụrụ aha na ụzọ kacha mma iji tinye ya n'ọrụ.
1 Gịnị bụ positivism mmekọahụ?
2 Otu esi etinye positivism mmekọahụ n'ọrụ
Gịnị bụ positivism mmekọahụ?
Ọ bụ ugbu a nke na -enwe ọtụtụ ndị na -eso ụzọ na -ewere mmekọahụ dị ka ihe dị n'ime mmadụ nke a ga -enwerịrị obi ụtọ. Positivism mmekọahụ na -akwado inwe ndidi mgbe a bịara n'ihe gbasara mmekọahụ na ịghara ịkpa oke na ya n'agbanyeghị iwu ndị otu obodo nwere ike itinye. Ị ga -anụrịrị ụtọ inwe mmekọahụ nke ọma wee hapụ nkwenkwe ụgha nke na -anaghị enye ihe ọ bụla.
N'ihe gbasara ebumnuche nke ugbu a na -achọ, ekwesịrị ịkọwapụta ihe ndị a:
Nnwere onwe na nkwanye ùgwù n'ihe metụtara ihe niile gbasara mmekọ nwoke na nwanyị.
Ị ghaghị ịnagide ihe kwupụta omume mmekọahụ ọ bụla ma ghara ịkatọ ya n'efu.
Anyị ga -ahụrịrị na agụmakwụkwọ n'ihe gbasara mmekọ nwoke na nwanyị bụ eziokwu ma zuo oke dịka o kwere mee, enwere onwe ya pụọ ​​n'ụdị taboos ma ọ bụ ụkpụrụ ọ bụla.
Otu esi etinye positivism mmekọahụ n'ọrụ
Mgbe a bịara itinye ihe ugbu a n'ọrụ, inwe echiche ziri ezi banyere mmekọahụ dị mkpa. Ị ga -ebido n'onwe gị wee wepụ ajọ mbunobi niile ị nwere ike inwe gbasara mmekọahụ. Site ebe a, ọ dị mma itinye positivism a n'ọrụ na mmekọrịta onwe onye.
Inwe omume a maka ihe niile gbasara mmekọahụ, Ọ bụghị ọrụ dị mfe ma na -achọ oge iji rụọ ya. Ọ bụrụ na ị gbanwee akparamagwa gị wee malite ịhụ mmekọahụ site n'ụzọ ọzọ, mgbanwe ahụ ga -abịa na mpaghara niile na anụrị na ọkwa mmekọahụ ga -adị ukwuu.
Na nkenke, ọ dị mkpa ịhapụ ịchafụ na ihere gbasara mmekọahụ bidokwa inwe uche ghe oghe ma a bịa na ya. Inwe ụfọdụ ịla azụ gbasara mmekọahụ na nkwenkwe ụgha banyere ya nwere ike inwe mmetụta na -adịghị mma na mmekọrịta.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na onye ahụ nwere uche mepere emepe ma a bịa n'ihe gbasara mmekọahụ, ọ ga -aba nnukwu uru ma a bịa n'iso ndị ọzọ nwee mmekọrịta. Ọ dị mkpa na akụkụ nke ọha mmadụ nke oge a na -amalite ịkwalite positivism mmekọahụ na mụta ịkwanyere na ịnagide ihe niile na -eme gburugburu ụwa nke mmekọ nwoke na nwanyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọahụ » Gịnị bụ positivism mmekọahụ